Artichoke - လွင်ပြင်၌အခွအေနကြီးထွားလာ, ပျိုးပင်စိုက်ပျိုး, မျိုးစပါးကြီးထွားလာ
Artichoke - ပျိုးပင်များအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမစိုက်ပျိုး, မျိုးစပါးကြီးထွားလာ
အေးလတ္တီတွဒ်အတွက်ရှားပါးထူးခြားဆန်းပြားထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဤစက်ရုံ, - လူအတော်များများ၏အမြင်တွင်, ကပူနွေးသောဒေသများတွင်သာပေါက်နေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာပင်မြောက်ပိုင်းဒေသများ၌သင်တို့ကိုမျိုးစပါး artichoke စိုက်ပျိုးမှုအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာအောင်မြင်သောဖွစျလိမျ့မညျကိုစိုက်နိုင်ပါတယ်။
အမြိုးအနှယျထံမှ artichokes ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျနော်တို့နားလည်ရကြလိမ့်မည်နှင့်အတူစတင်တစ်ဦး artichoke ကဘာလဲ? ဤသည်စက်ရုံတစ်အလှဆင် function ကိုရှိပြီးထူးခြားဆန်းပြားဥယျာဉ်ကိုဒီဇိုင်းဖြည့်စွတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထိုသို့စားရနိုင်သည်, ထို artichoke အလွန်အသုံးဝင်သည် - ထိုအသီးအပွကယ်လစီယမ်, ဖော့စဖောရက်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အက်ဆစ်နှင့်ဗီတာမင်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့ပမာဏပါဝင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အလွန်အရသာရှိတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ artichoke (အစောပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာမှ) စိုက်ပျိုးခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မတူညီသောအများအပြားမျိုးပေါင်းရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အညီအမျှရပျကိုကြာပါတယ်။ ပထမဦးစွာအစေ့အိမ်တွင် germinated ကြသည်, ထို့နောက်ပွင့်လင်းမြေ၌စိုက်သောပျိုးပင်ကိုလက်စသတ်။
artichokes စိုက်လိုက်တဲ့အခါ - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
အိမ်မှာ artichokes စိုက်သောအခါ, အမြိုးအနှယျကနေကြီးထွားလာခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပုံရသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပိုကောင်းအစောပိုင်း, တဦးတည်းကြင်နာယူ သာ. ကောင်း၏လိမ့်မည်။ artichoke ပျိုးပင်စိုက်ပျိုးရန်အခါအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်စောစောစိုက်ပျိုးခြင်းမတ်လအစောပိုင်းတွင်ထွက်ယူသွားပေမယ့် 2-3 ပတ်ကြာမျိုးစေ့များ၏ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစပါး artichoke အညှောက်ပေါက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဆင်းသက်ဘို့ artichoke ပြင်ဆင်မှုကျနော်တို့2ပတ်အဘို့အချေး။ ကျနော်တို့ဖြည့်အစေ့၏အောင်မြင်သောပင်ပေါက်ရန်အတွက်အခန်းအပူချိန်မှာရေကာကွယ်ပြီးပူနွေးတဲ့အခန်းထဲမှာ 10-12 နာရီထားခဲ့ပါ။ အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အစေ့သည်ကောင်းတကိုယ်လုံးရောင်ဤအချိန်အတောအတွင်း, ထို့နောက်ငါတို့သည်သူတို့ကို, ပျော့ပျောင်းသည့်သဘာဝထည်ထုပ်ပိုးပြီးပေါ်ပြန့်ပွားထဲကယူကြသတ္တုပါးနှင့်အတူကိုဖုံးလွှမ်းကြာကြာထိန်းသိမ်းထားနှင့်နွေးထွေးသောအရပ်ဌာန၌ထားတော်မူ၏။ ငါးရက်ပြီးနောက်, အစေ့အညှောက်ပေါက်ရန်စတင်သင့်ပါတယ်။
ထိုနောက်မှကျနော်တို့အောက်ခြေကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာဆော့ဝဲအစုအဝေး၌ထားလေ၏။ ဒါကလိုအပ်ချက်သည်မဟုတ်, ဒေါသမျိုးစပါးယာယီအအေးအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အဆိုပါစက်ရုံခွန်အားတိုးပွါးလိမ့်မည်, နှစ်တွင်ပန်းပွင့်နှင့်အသီးကိုအရှင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုအလွန်တိုးတက်။2ပတ်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအစေ့ကျနော်တို့ကြိုတင်ယူထား။
artichoke - စိုက်ပျိုးပျိုးပင်များ
ထိုအခါငါတို့သည် artichoke ၏အစေ့ကိုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။ တစ်ဦးသင့်လျော်သောကွန်တိန်နာစတင်ပြင်ဆင်ထားရန် - ဒီသမားရိုးကျပလပ်စတစ်ဗန်းနဲ့အထူးဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည် ပျိုးပင်များအတွက်ကွန်တိန်နာ ။ artichoke များအတွက်အကောင်းဆုံးမြေဆီလွှာတွင် - humus, ဆွေးနဲ့သန့်စင်ပေးရမည်သဲအရောအနှော။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကောင်းစွာ Blend နဲ့ငယ်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအကြံပေးအဖွဲ့၏အောက်ခြေတွင် stagnate ပါဘူးပိုလျှံအစိုဓာတ်ကိုမှရေနုတ်မြောင်းသွန်းလောင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်းကို4စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှာ 1-1.5 စင်တီမီတာတွင်းအတိမ်အနက်ကိုဖွဲ့စည်း, မြေဆီလွှာအလွှာစည်းကြပ်။ ချွတ်ချွတ်၏အစေ့ပျံ့နှံ့နှင့်မြေကြီးကိုသေးငယ်တဲ့အလွှာ, ကောင်းမွန်သောအသားအရေစိုပြေမှုန်ရေမွှားဖြန်းရန်။ စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ပူနွေးပြီးကောင်းစွာ-lit အရပ်စံပြပြတင်းအတွက်ကွန်တိန်နာထားပါ။ သို့သော်တိုက်ရိုက်နေရောင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ သတ္တုပါးသို့မဟုတ်ဖန်ကိုစိုက်မျိုးစပါးနှင့်အတူအဖုံးဖုံးမဖြစ်သင့် - ထို artichoke ဖန်လုံအိမ်အခြေအနေများမလိုအပ်ပါဘူး။
artichoke ပျိုးပင် - ကြီးထွားလာ
ဒါဟာပထမဦးဆုံးအညွန့်ပေါ်လာဖို့ရက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်နှင့် 10-12 ရက်အကြာမှာစက်ရုံပထမဦးဆုံးစစ်မှန်တဲ့အရွက်ဖွဲ့စည်းစေမည်ထိုက်သည်။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ artichoke ကောင်းစွာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်, လက်ျာကြီးထွားလာအခြေအနေများနှင့်အတူသူ့ကိုပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအပူချိန်ကိုလျှော့ချ, အထက်သို့ဆွဲငင်မဟုတ်ပင်ပေါက်ဖို့ကောင်းသောယူနီဖောင်း illumination ပေး။ ရေလောင်းဘာမှဖို့ artichoke ၏တိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ဖြည့်ညှင်း, ပိုလျှံအစိုဓာတ်အတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အပင်ပြီးသားအနည်းငယ်အရွက်များလာတဲ့အခါသူတို့တစ်တွေဘုံကွန်တိန်နာအတွင်းအနီးကပ်ဖြစ်လာ, ဒီကာလထဲမှာစေရန်အရေးကြီးပါသည် ယင်းရွေး ပြောင်းလဲမှုများအတွက်စွမ်းရည်ကျယ်ဝန်းဖြစ်သင့်သည်။ အိုးတို့သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလုပ်နေတာအလယ်၌, မြေကြီးဖြည့်ခြင်းနှင့်လောင်း။ ဘုံကွန်တိန်နာထဲကနေချုံပျိုးပင် Extract လုပ်ပါ။ ဒီကြွယ်ဝစွာပေးသနားတစ်ပင်ထုတ်ယူအပေါ်ညင်ညင်သာသာသို့ဖြစ်လျှင်, မြေဆီလွှာများရေလောင်းခြင်းနှင့်ဗဟိုကျောရိုး၏အစွန်အဖျားကိုထုတ် pinch - ကကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျကောင်းစွာပေါက်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပေသည်။
ထိုအခါကျွန်တော်တစ်ဦးနွေးများနှင့်ကောင်းစွာ-lit အရပ်ဌာန၌သီးခြားကွန်တိန်နာအတွင်းရေနှင့်နေရာအများအပြားချုံပေါ်ကိုဆင်းသက်။ နှစ်ပတ်အကြာတွင်အမြိုးအနှယျကနေစိုက်ပျိုး artichoke ၏ပျိုးပင်, ပထမဦးဆုံးနို့တိုက်ကျွေးရေးလိုအပ်နေပါသည် - များ၏ပြုတ်ရည် mullein , 1:10 ရော။ နှစ်ပတ်အတွင်း၏နောက်ထပ်အလှည့်ချုံဓာတ်သတ္တုဓာတ်မြေသြဇာရှုပ်ထွေးသော fertilize ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဤကာလအတွင်းပျိုးပင်အောင်မြင်သောဖြစ်သောအမျိုးအနွယ်၏စိုက်ပျိုးမှု artichoke, သင်ခိုင်မာစေရန်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦးနွေးနှင့် windless ရက်ပေါင်းကိုရှေးခယျြနှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုထဲသို့နာရီအနည်းငယ်အဘို့အပျိုးပင်နှင့်အတူကွန်တိန်နာအထဲကယူပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာအတွက် artichoke ၏နေအိမ်သို့အချိန်တိုက်ရိုက်နေရောင်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာကနေပုန်းအောင်း, 10 နာရီတိုးမြှင့်ရပါမည်။
artichoke - လွင်ပြင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ဥယျာဉ်တော်၌ artichokes ကြီးထွားဖို့ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုအဖြေ, သိသာဖြစ်ပါသည် - ဖြစ်နိုင်ပါ! သူသည်သင်တို့ကိုဆင်းသက်များအတွက်နေရာကောင်းကိုရွေးချယ်မိလျှင်, အသီးပွင်ခြင်းနှင့်ထမ်းပင်တတ်နိုင်သည်။ တစ်ချိုင့်ဝှမ်းမဟုတ်ဘဲသင့်လျော်မှာတည်ရှိပါတယ်ပွညျသူပွညျသား Shaded ဒေသများသို့မဟုတ်ဝစော - artichoke မြစ်များကိုနက်ရှိုင်း သွား. , အခါ, ပိုလျှံအစိုဓာတ်ကိုကားပုပ်ပျက်တတ်ရန်စတင်နိုင်ပါသည်။ တောင်ပိုင်းဆင်ခြေလျှော - အစေ့ကနေစိုက်ပျိုးပျိုးပင်များစိုက်ပျိုးများအတွက်စံပြနေရာအရပ်။
အပင်ကွယ်ပျောက်အရပ်ရှည်ရှည်ခြံစည်းရိုးများနှင့်သစ်ပင်များ မှစ. , အိပ်ရာသို့မဟုတ်သီးခြားမြေတွင်း၌စိုက်သောနိုင်ပါသည်။ မေလလယ်တွင် - ဖွင့်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ artichoke ၏အစေ့စိုက်ပျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်။ ချုံဖုတ်ဆင်းသက်ဖောဖောသီသီရေလောင်း, နှင့်မြေဆီလွှာရပါမည်ပြီးနောက် zamulchirovat ။ အပင်များ၏လိုက်လျောညီထွေဓာတ်မြေသြဇာချေးဖြစ်စေပြီးနောက်။
မျိုးစပါးအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးမှန်ကန်သောဆင်းသက်နှင့်ထွက်ခွာ artichokes ၏အခြေအနေများအောက်တွင်သြဂုတ်လစက်တင်ဘာလအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပွင်, ပြီးတော့ရေလောင်း volumes ကိုသိသိသာသာလျှော့ချရပါမည်။ ယင်းမှည့်သော artichoke ရှိမရှိနားလည်စေရန်, အထက်အကြေးခွံများရွေ့လျားစစ်ဆေးပါ။ သူတို့ဆိတ်ကွယ်ရာရွှေ့နိုင်ကြသည်လျှင်, ကရိတ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
Raspberry - ရောဂါများနှင့်ပိုးမွှား
Ixia - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Sagina subulata - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
အိမ်မှာအမြိုးအနှယျကနေကြီးထွားလာစတော်ဘယ်ရီ - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏စည်းမျဉ်းများ
အဆိုပါသစ်ခွ phalaenopsis အစားထိုးကုသမှဘယ်လိုနေသလဲ?
အာလူးက "အပြာ" - မျိုးစုံ၏ဖော်ပြချက်
Rhododendron - အချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ပြင်ဆင်
Kendall Jenner မဂ္ဂဇင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်မီးပေါ်မှာမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်
လည်ပင်းတစ်ဝိုက်ရှုပ်ထွေးမှုကျြကွိုး 1 ကြိမ်
ဂျင်း - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး
မီးခိုးရောင်ရင်ခွင်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
Adel 10 နှစ်သားအဘို့စင်မြင့် left
ပိုးစာကနေစပျစ်ရည်ကို - ပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်မှာအရက်၏မူလချက်ပြုတ်နည်းများ
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုများအတွက် Monitor ကိုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Yorkshire Terriers အဝတ်အစားများအတွက်